बुटवल। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी वैशाखमा चुनाव हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले संसद पुस्थापना नभई चुनाव हुन नसक्ने दावी गरेका हुन्। ओली हिटलरजस्तै निरंकुश र तानाशाही नेता भएको जनाउँदै छिट्टै पतन हुने बताए।
राज्यका सबै अंग नियन्त्रणमा लिएर दुई तिहाइ मतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु चरम निरंकुशता र तानाशाही प्रवृत्ति भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘म उनलाई हिटलरसँग तुलना गर्छु,’ उनले भने, ‘केपी शर्मा ओलीमा पनि चरम महत्त्वाकांक्षा छ। निरंकुशता छ। यस्ता शासक जतिसुकै बलिया ठानिए पनि छिट्टै पतन हुन्छन्। आफू मात्रै होइन अरूलाई पनि सर्वनाश पार्छन्।’
संसद पुनस्थापना नगरी हुने चुनावबाट कसैको बहुमत नआउने र मुलुक संवैधानिकरुपमा सधैंका लागि अस्थिरतामा फस्ने उनले औंल्याए। भट्टराईले अगाडि भने, ‘चुनाव गर्न होइन, व्यवस्था भत्काउने र निरंकुश शासक बन्न चुनाव घोषणा गरिएको हो। ओलीको माइन्ड सेट नै गलत आचरण र चरम महत्वाकांक्षाको छ।’ नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमन मात्र नभई लोकतन्त्र र संविधानमाथिकै प्रहार भएको बताए।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, एनटी मनी सेक्टर ( अख्तियार) जस्ता अंगलाई कब्जा गरेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभाछ। आफू एक्लै शासक बन्नुभाछ। यो लामो समयदेखिको सेटिङ र महत्त्वाकांक्षाका कारण भएको हो,’ भट्टराईले भने। संवैधानिक निकाय, सुरक्षा लगायत राज्यका सबै अंग नियन्त्रणमा लिएर तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सेटिङ गरेर ओलीले संसद विघटन गरेको भट्टराईको विश्लेषण छ।
‘सबै कुरा सेटिङमा भएको छ, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सेटिङ भएको छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘अदालतबारे मैले बोल्नु उपयुक्त हुन्न, तर अरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर सबै अंग नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्रै संसद विघटन भएको छ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले नसच्याए तेस्रो जनआन्दोलनको बलमा संसद पुनस्थापना गर्नुपर्नेमा भट्टराईले बताए।
संसद विघटनको घटना हिमशिखरको टुप्पो देखिएको अवस्था मात्र हो भन्दै भट्टराईले अदालतबाट यो नसच्चिए हिम शिखर फुटेजस्तै जोखिम हुने औंल्याए। ‘संसद विघटनको गल्तीलाई सच्याउने सजिलो बाटो सर्वोच्चको फैसला हो,’ भट्टराईले भने, ‘नभए दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा पनि उच्चस्तरको तेस्रो जनआन्दोलनको खाँचो छ, त्यसले मात्रै संसद पुनस्थापना गर्नसक्छ।’
ओली समूह र कमल थापाको पार्टीबाहेकका सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर संयुक्त जनआन्दोलन उठाउनुपर्ने भट्टराईको धारणा छ। नेपाली कांग्रेसको अनिच्छा र नेकपा विभाजनको औपचारिक टुंगो नलागेकाले संयुक्त आन्दोलनमा ढिलाइ भइरहेको भट्टराईले बताए।